माडीमा समातिए गाउँ पसेका दुई बाघ | चितवन पोष्ट दैनिक
माडीमा समातिए गाउँ पसेका दुई बाघ
२०७० मंसिर १७, सोमबार ०३:२४ गते
कसरा । गाउँ पसेर घरपालुवा जनावर मारेर खाने दुई बाघलाई चितवन निकुञ्जले नियन्त्रणमा लिएको छ । माडी क्षेत्रमा देखा परेका दुई बाघलाई निकुञ्जले तीन दिनको फरकमा नियन्त्रणमा लिएको हो । दुवै बाघ वयस्क भाले हुन् । एउटा बाघ चोट लागेर कमजोर भएको अवस्थामा फेला परेको छ । अर्को बाघ आहारा कम भएर गाउँ पसेको निकुञ्जका अधिकारीहरुको अनुमान छ ।
निकुञ्जले आइतबार दिउँसो माडी बघौडा गाविसको वडा नं. ४ बाट आठ वर्षको भाले बाघ नियन्त्रणमा लिएको हो । मंसिर ३ गतेदेखि गाउँ पसेको सो बाघले गोठमा बाँघेका सातवटा गाई भैसी मारेको र दुईवटालाई घाइते बनाएको निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत विष्णु थपलियाले बताए । सो बाघको शरीरका तीन ठाउँमा चोट पटक छ ।
‘सायद अर्को वयस्क भाले बाघसँग जुधेर चोट लागेको हुनुपर्छ’ सहायक संरक्षण अधिकृत थपलियाले भने । गाउँको बीचमा रहेको बाँस घारीमा सो बाघ लुकेर बस्ने र साँझ परेपछि गोठमा गएर गाई भँैसी मार्ने गरेको थपलियाले बताए । गाउँको बीचमा बसेका हुनाले नियन्त्रणमा लिन अपरिहार्य भएको उनले बताए ।
त्यस्तै कात्तिकको दोस्रो हप्तादेखि गाउँ आएर गाई भैँसी मारेर खाने गरेको अर्को बाघलाई निकुञ्जले मंसिर १३ गते नियन्त्रणमा लिएको थियो । अयोध्यापुरी गाविस वडा नं. ७ गणेशगञ्जबाट निकुञ्जले बाघलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । सो बाघ अन्दाजी छ वर्षको भाले रहेको सहायक संरक्षण अधिकृत थपलियाले बताए ।
‘मंसिर १३ मा हामीले नियन्त्रणमा लिएको बाघ भने स्वस्थ थियो । जंगलसँगै जोडिएको गाउँमा पसेर बाघले घर पालुवा जनावरहरु मारेको थियो । जंगलमा आहारा कम भएर बाघ गाउँ पसेको हुनु पर्छ’ थपलियाको अनुमान छ । सो बाघले माडीको अयोध्यापुरी र कल्याणपुर गाविसमा १४ वटा गाई भैसी मारेर खाएको थियो ।
एउटा भाले बाघका लागि कम्तीमा पनि १२० वर्ग किलो मिटर क्षेत्रफल आवश्यक हुन्छ । तर माडीमा त्योभन्दा कम क्षेत्रमा दुई दुईवटा भाले बाघ देखा परेका छन् । देखिएका यी दुई भाले बाघभन्दा पनि अर्को भाले बाघ रहेको अनुमान अधिकारीहरुको छ । सानो क्षेत्रमा आहारा कम हुनु र भाले जुधेर घाइते भएका कारण बाघ गाउँ आएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
मंसिर १३ गते समाएको बाघलाई निकुञ्जका अधिकारीहरुले रेडियो कलर जडान गरेर निकुञ्जको घना जंगलमा छाडेका छन् । आइतबार भेटिएको बाघ घाइते भएकाले निकुञ्जको मुख्यालय कसरामा राखेर थप उपचार गर्ने सहायक सरक्षण अधिकृत थपलियाले बताए । चितवन निकुञ्ज बाघको मुख्य वासस्थल हो । नेपाल भर १९८ बाघ रहेकोमा चितवनमा मात्रै १२० बाघ रहेका छन् ।